Xildhibaannada Haweenka ah ee Baarlamanka Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray Nairobi”Sawirro” – Samaale News
Tababarkani xildhibaanada haweenka ee baarlamanka Soomaaliya loogu soo xiray Magalaada Nairobi ayaa waxa uu ku saabsanaa la xisaabtanka qeybaha kala duwan ee hay,adaha dowlada,sidii ay xuquudoooda ku heli lahaayeein haweenka Soomaliyeed iyo horumarinta tayada xildhibanada haweenka ee ku jira baarlamaanka.
Tababarkan oo uu soo qaba qaabiyay baarlamanka yurub ee AWEPA ayaa waxaa loo qabtay xildhibaano isugu jira 21- haweeen ah iyo 6-xildhiban oo ah la taliyayaal.
Xiritaanka Tababarkani ayaa waxaa goob jog ka ahaa ku simaha Safiirka ahna safiir ku xigeenka iyo Xubno ka socday AWEPA oo soo qaba qaabisay Tababarkani.
Xildhibaan Biibi Khaliif Maxamed oo ah gudoomiyaha haweenka ku jira baarlamanka Soomaaliya ayaa waxay ugu horeyn ka warbixisay Muhimada Tababarkani uu u leeyahay Xildhibanada haweenka ah.
“Waxaa la xqiijiyay in aan heli karno %30,laakiin anaga shaki ayaa noogu jira maxaa yeelay mar walba xaqeena ayaa lagu tuntaa,marka waxaan rabnaa in aan helno xaqeena oo sharciyeysan oo dastuurka ku qoran ma aha in qoraal lagu soo saaro oo kaliya aan ku qaadano”Ayey tiri xildhibaan Biibi.
Ku simaha Safiirka ahna ku xigeenka safiirka Maxamed Amiin Sheekh Cismaan oo si rasmi ah u soo xiray tababarka ayaa waxa uu bogaadiyay dowrka haweenka ay ku leeyihiin siyaasada dalka.
“Dumarka Soomaaliyeed waa ugu horeeyaan siyaasada dalka iyo ka qeyb qaadashadeeda ,waxayna muujineysaaa awooda ay gabadhuhu ku leedahay in ay matasho bulshadeeda,waxaana rajeynayaa inay sii korodho tiradiina marwalba oo ay aqoonta badato waxaa dhaceysa in doorkiina uu muuqdo maxa yeelay mujtamaca soomaaliyeed waligood dhibaato kama jirin qeybta haweenka ay ku laayeen dowladihii hore,waxaan rajeynayaa dadaalada socda maalmahan danbe inay miro dhal noqon doonaan waana mahadsantihiin” Ayuu yiri ku simaha safiirka.
Tababarkani ayaa waxa uu qeyb ka yahay tababarro dhowr ah oo looga hadlayay dowrka ay haweenka ee siyaasada soomaaliya iyo sare u qaadida aqoonta haweenka ku jira baarlamaanka Soomaaliya.